एम्बुलेन्स भित्र जम्यो तासको खाल, नाकाबन्दीका लागि मोदीले माग्लान त माफी ? (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
- नेपाली सन्देश शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५ , 4.3K जनाले हेर्नुभयो
बुटवल । बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालबाट अन्य अस्पतालमा रिफर हुने बिरामीको लागि एम्बुलेन्स खोजेको समयमा पाइदैन र महँगो भाडा तिरेर ट्याक्सीमा जानु पर्छ ।
तर अस्पतालमा परिषरमा रहेको एम्बुलेन्स भने बिरामी बोक्न नभै चालकहरुको तास खेल्ने अखडा बनेको छ । अस्पतालमा पुगेका बिरामीले एम्बुलेन्स भएपनि चालकहरु नभएको गुनासो गरेपछि बुधबार बुटवल स्थीत टिभी जर्नलिष्ट कुष्ण पाण्डे अस्पताल परीसरमा पुग्दा एम्बुलेन्स पार्कीङमा राखेर एम्बुलेन्स चालकहरु लु १ च ९५३८ नम्बरको एम्बुलेन्समा तास खेलीरहेका थिए ।
मणिग्रामस्थीत परिर्वतन समाजद्धारा सञ्चालित एम्बुलेन्स अस्पतालको पार्किङमा राखेर चालकहरु तास खेलिरहेका थिए ।
तास खेल्नेहरुको टिममा एम्बुलेन्स चालक संघको टेड्र युनियन महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष यदुनाथ भण्डारी समेत थिए ।
सरकारले जुवामा बन्देज लगाएको छ र जुवा खेल्नु आँफैमा पनि गलत हो । त्यस माथी अत्यावश्यक अवस्थामा बिरामी बोक्नु पर्ने एम्बुलेन्स चालकहरु नै अस्पताल परिषरमा एम्बुलेन्स भित्र जुवाको खाल जमाउनु सामान्य लापवरवाही होइन ।
ठेकेदार र कर्मचारीको चरम लापरवाही, नबन्दै भत्किए संरचना
धरान । विकास निमार्णमा हुने ठेगेदारको लापरवाही कारण निर्माण पुरा नहुदै संरचनाहरु भत्किनु नयाँ कुरा होइन । सम्बन्धित निकायको नियमन नगर्दा विकास निमार्णमा ठेगेदारहरुको मनोमानी चलिरहेको छ ।
यस्तै भएको छ धरान उपहानगर पालिका १६ स्थित जनपथ रोड निर्माणमा पनि । धरान १२ देखि धरान १३ को सिमाना सम्म ९ सय ८० मिटर लामो सडकको ड्रेन निर्माणमा पनि ठेगेदारले चरम लापबाही गरेको छ ।
धरान उपमहानगर पालिकाले जनपथलाई नमुना सडक बनाउने भन्दै दुई करोडमा टेण्डर आह्वान गरेको भए पनि शाह निर्माण सेवा कम्पनी १ करोड ३९ लाख २७ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ टेण्डर पारेको थियो ।
पुसबाट ड्रेन निर्माणको काम सूरु गरेको थियो । तर ड्ेन निमार्ण सूरुवात देखिनै कम्पनीले कमजोर काम गरेको भए पनि धरान उपमहानगरपालिका भने मौन रहेको छ ।
ड्रेन निर्माण गर्दा शालिक गरेर मात्र इटाको वाल उठाउनु पर्ने भए पनि माटो माथि इटा राखेर उठाएको थियो । जसका कारण ड्रेन निर्माण पुरा नहुदै भत्कन थालेको छ । दुवैतिर ४ फिट ३ इन्चको दुवैतर्फ ड्रेन र फुलबारीसहितको सडकको चौडाई ५० फिट रहने गरी सडक निर्माण सुरु गरिएको भएपनि अहिले सो मापदण्ड समेत पुरा गरिएको छ्रैन ।
नरेन्द्र मोदीलाई सीमाको बाँध भत्काउन भनेर कसले भन्ने ?
सप्तरी । शुक्रबार भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदैछन् । मोदी भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच महत्वपुर्ण सम्झौताहरु हुनेछन् । दशकौ देखी भारतले पुरा नगरेका आयोजना पुरा गर्ने पनि सहमति हुनेछ । तर व्यवहारमा ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन भएको देखिदैन् ।
यस बाहेक नेपाल र भारतको सिमा क्षेत्रका समस्याहरु नै मुख्य छन् । उदाहरणका लागि सप्तरीस्थीत तिलाठी कोहिलाडीको खाँडो नदी व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । हरेक बर्ष खाँडो नदीमा आउने बाढीका कारण सप्तरीमा बर्षेनी ठुलो संख्यामा जनधनको क्षती हुने गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप दशगजा क्षेत्रको ८ किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा दुई देशको सहमति विना कुनै संरचना बनाउन मिल्दैन् । तर भारतले भने एकलौटी रुपमा दशगजाको १० मिटर नजिक बाँध बनाएपछि प्रत्येक बर्ष सप्तारीका दर्जन बढी गांउहरु डुवानमा पर्छ ।
खाँडो नदिको उत्तरी क्षेत्र नेपाल तर्फ पर्ने भएकाले हरेक बर्ष नेपाल सरकारले करोडौँ खर्चे र तटबन्द, ग्याबीन जाली लगाउने गर्छ तर दक्षिण दशगजामा पुग्दा भारतले पुर्व पश्चिम ठुलो बाँध निमार्ण गरेको छ ।
हिँउदको समयमा कम पानि हुँदा समस्या नभएपनि हरेक बर्खामा दशगजामा भारतले लगाएको बाँधले छेकेर नेपालले बनाएका सबै संरचना धोस्त हुन्छन् र नेपाल तर्फं डुबानमा पर्छ ।
यस बिषयमा २०६७ सालबाटै दुवै देशका सरोकारवालबिच अनौपचारीक छलपल हुँदै आएपनि सार्थकरुप लिन सकेको छैन । दशगजामा बन्ने हरेक संरचना दुई देशको समझदारीमा बन्नु पर्ने भएपनि खाँडो नदि व्यवस्थापनका लागि भारतले चासो नदेखाउँदा समस्या भएको हो ।
विवादित भारतीय बाँधकै कारण तिलाठीस्थित दशगजा क्षेत्रमा नेपाल र भारत तर्फका स्थानियहरुबीच झडप समेत हुने गर्दछ । सन् २०१४ मार्चमा भारत बिहारको पटनामा भएको दुई देशका जलस्रोत अधिकारीहरुको बैठकमा सप्तरीको तिलाठी तथा रम्पुरा मल्हनियाँ भई दशगज्जा हुँदै भारत तर्फ बग्ने खाँडो तथा जिता नदिको निकासका लागि विस्तृत योजना सहित काम अघि वढाउने सहमति भएको थियो । भारतका कारणले जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
दुई देशबीचको कोशी सम्झौता अनुरुप कोशीका सहायक नदिहरुको सम्पुर्ण जिम्मेवारी भारतीय पक्षको भएपनि भारतले भने उल्टो दशगजामा बाँध बनाएर नेपाली भुभाग डुबान हुने गर्दछन् ।